Umeluleki osemqoka kuMongameli uDonald Trum uhlolwe ukuthi une-Covid-19 - teles relay
Umeluleki osemqoka kuMongameli uDonald Trum uhlolwe ukuthi une-Covid-19
Umeluleki wezokuphepha kaMengameli uDonald Trump, uRobert O'Brien, usehlolile ukuthi i-coronavirus ayitholi kahle, kusho i-White House.
UMnu O'Brien, 54, uzimele yedwa futhi usebenza ekhaya.
Umsizi unezimpawu ezibucayi futhi bekungekho bungozi bokuthi abonakaliswe nguMnu uTrump noma iPhini likaMongameli uMike Pence, ngokusho kwesitatimende.
UMnu O'Brien uyisikhulu esiphezulu kunabo bonke abaphathi bakaTrump okwaziwa ukuthi une-HIV.
Akukaziwa ukuthi yena kanye nomengameli bahlangana nini okokugcina, kodwa isikhulu sabaphathi sithe bekungakabi 'zinsuku' ezimbalwa. Lo mbhangqwana uvele ndawonye emasontweni amabili edlule ohambweni oluya eMiami.
Isitatimende seWhite House sifundile, "Unezimpawu ezithambile, uzenzele yedwa futhi wasebenza endaweni ephephile ngaphandle kwendawo. Akunabo ubungozi bokuthi kuvezwe umongameli noma iphini likamongameli. Umsebenzi woMkhandlu Kazwelonke Wokuphepha uyaqhubeka ngaphandle kokuphazamiseka. . "
Abanye abasebenzi batshele abakwa-CNN ukuthi bafundile ngaleli gciwane kusuka kwabezindaba ngoMsombuluko.
Umthombo utshele iBloomberg ukuthi uMnu O'Brien ubesephumile isonto lakhe kanti umeluleki wakhe walithola leli gciwane ngemuva komcimbi womndeni.
Noma ngubani osondele kumongameli uvame ukuhlolwa i-Covid-19.
Iningi labantu abaphathi nabasondelene nabaphathiswa bahlolwe ukuthi banezinkinga yini, kufaka phakathi isisebenzi esisebenza e-White House, unobhala wezindaba kaMnu Pence, uKatie Miller kanye neqembu Izindiza ezinophephela emhlane zasolwandle.
URobert O'Brien ungubani?
Ummeli ngokuzilolonga, wayenomsebenzi omude wokuzisholozela ekhonza amaRepublican nama Democrats. Ukholelwa ukuthi yilungu elikhulu kakhulu lamaMormon ekuphathweni kukaTrump.
Ukhethwe ukuthi athathe isikhundla sikaJohn Bolton njengomeluleki wezokuphepha kuzwelonke ngoSepthemba nyakenye, ngemuva kokuba uMnu Bolton eshiye igqubu noMengameli uTrump.
Isihloko semidiyaEkhuluma ngo-Ephreli 2019, uRobert O'Brien ukhuluma nemindeni yaseMelika eboshwe phesheya
UMnu O'Brien uhlanganyela imibono efanayo nekaMnu uTrump ezindabeni eziningi, kubandakanya nokugxekwa kwe-UN kanye nokuphikisana nesivumelwano senuzi sase-Iran.
UMnu O'Brien uvakashele eParis kule nyanga ukuyoxoxa ngezinkinga zenqubomgomo yezangaphandle nabalingani bakhe baseYurophu, futhi wanikeza inkulumo e-Arizona ngoJuni eqhathanisa noMongameli waseChina uXi Jinping nomholi waseSoviet uJoseph Stalin.
Amajele asenkantolo yaseGibhithe athonya ama-video "amanyala"